တရုတ် Palmitoyl Tripeptide-5 စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | JYMed
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Palmitoyl Tripeptide-5
အဘယ်သူမျှမ .: CAS 623172-56-5
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 839,959 g / mol
Applications ကို: ချောမွေ့အရေပြား, Anti-အိုမင်း
Palmitoyl Tripeptide-5 မိုင်နိုအက်ဆစ်ချည်နှောင်တက် လုပ်. , ကကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကျန်းမာတဲ့တစ်သျှူးကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်ရှိရာအရေပြားအပေါ်ယံထိုးဖောက်နှင့်နက်ရှိုင်းသောအရေပြားအလည်လွှာထဲသို့ဝင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရေပြားအတွက်ကော်လာဂျင်ပေါင်းစပ်ဖွင့်အမြန်နှုန်းမသာပေမယ့်အစောပိုင်းလေ့လာမှုများဒီ peptide လည်းအရေပြားဆဲလ်နှငျ့ဆကျသှယျနှင့်အန္တရာယ်လုပ်နေတာမှသူတို့ကိုထိုးဖောက်ကြောင့်အဆိပ်တားဆီးနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းဘာလုပ်ရမှန်းဆဲလ်တွေကိုပြောပြသောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝအဆက်သွယ်ရေးယန္တယားန်းမှာဖွငျ့ဤပါဘူး။ ဆက်သွယ်ရေး၏ဤမျိုးဟာအဆိပ်ထုတ်ရှင်းလင်းရန်မှဖြစ်စေအရေပြားဆဲလ်ကူညီပေးသည်သို့မဟုတ်ပါကအစွမ်းမဲ့ပြန်ဆို။ Palmitoyl Tripeptide-5 ရဲ့သဘာဝကပြည်နယ်မျှအနံ့ရှိပြီးရေတွင်ပျော်ဝင်ကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤသည် peptide အသားအရေပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးထုတ်ကုန်များ၏နံပါတ်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်, သို့သော် Anti-အိုမင်းလိမ်းဆေးနှင့်မျက်နှာသွေးရည်ကြည်ထဲမှာအများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုသည်။ Palmitoyl Tripeptide-5 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရေပြားဆဲလ်နှငျ့ဆကျသှယျနှင့်ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်၏ကွဲပြားခြားနားသော Anti-အိုမင်းထုတ်ကုန်များ၏အရေအတွက်အတွက်အသုံးပြုသည်။ Young-ရှာဖွေနေ, ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအသားအရေကော်လာဂျင်မပါဘဲမဖြစ်နိုင်ပါ, နှင့်အဟောင်းများကိုသင့်ရဲ့အသားအရေရရှိသွားတဲ့တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နည်းကော်လာဂျင်။ ကော်လာဂျင်ဆံ့သောအခြားထုတ်ကုန်များစနစ်တကျအရေပြားကိုထိုးဖောက်ဖို့သိပ်ထူဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်သဘာဝကျကျကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အရေပြားဆဲလ်ကိုပြောပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Anti-အိုမင်းသွေးရည်ကြည်နှင့်လိမ်းဆေးထုတ်လုပ်ရန်သာ Palmitoyl Tripeptide-5 ကို အသုံးပြု. ဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများ, ဒီကိုလည်းပြုလုပ်အလွန်အမင်းထိရောက်သောစေသည် ။ Palmitoyl Tripeptide-5 ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့အတွင်းပိုင်းထံမှထွက်အလုပ်လုပ်တယ်သောကြောင့်, သငျသညျပိုမြန်သင်တိရိစ္ဆာန်တစ်ရှူးများထံမှကော်လာဂျင်ပါဝင်သောတစ်ဦးမုန့်သို့မဟုတ်သွေးရည်ကြည်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ Palmitoyl Tripeptide-5 ကိုရည်မှတ်လေ့လာမှုများ၎င်းတို့၏အစောပိုင်းအဆင့်နေဆဲနေစဉ်, ဒီ peptide ကိုရည်မှတ်မဆိုလေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အနည်းငယ်အစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်။ သငျသညျအထိခိုက်မခံအသားအရေရှိပါကသို့သော်, သင်သည်ဤ peptide်Anti-အိုမင်းထုတ်ကုန်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ တချို့ကဘုံမတည့်တုံ့ပြန်မှုအရေပြားလာခြင်း, လျှောက်လွှာ၏ site မှာပြင်းထန်တဲ့နှင့်အဖုဖြစ်ကြသည်။ Palmitoyl Tripeptide-5 ပါဝင်သော Anti-အိုမင်းထုတ်ကုန်သုံးနေစဉ်သင်တို့သည်ဤကိစ္စများမဆိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့လျှင်, သင် peptide တုံ့ပြန်မှုဖြစ်စေတဲ့သို့မဟုတ်အခြားထုတ်ကုန်စုစုပေါင်းများအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပါကနေသည်ဖြစ်စေမသိရှိနိုင်ရန်ဖို့ချက်ချင်းပဲသင့်ရဲ့အရေပြားအထူးကုဆရာနှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ် သငျသညျ။ ရေရှည် Palmitoyl Tripeptide-5 / syn-coll ပြုပြင်ခြင်းလက်ကားဈေးနှုန်းအလှကုန်ကုန်ကြမ်းအရေပြားများအတွက်အပြန်အလှန်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသည်စားသုံးသူများနှင့်အတူပူးတွဲဖန်တီးပေးရန်အတွက် "စိတ်ရင်းမှန်, ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, တိကျခိုင်မာစွာနှင့်စွမ်းရည်" / ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတခု၏ persistent ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည် Pal-kvk Powder, သင့်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုကြှနျုပျတို့၏ထာဝရတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏! နွေးနွေးထွေးထွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသွားရောက်ဖောက်သည်အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာကြိုဆိုပါတယ်။ "စိတ်ရင်းမှန်, ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, တိကျခိုင်မာစွာနှင့်စွမ်းရည်" နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနှင့် Palmitoyl Tripeptide-5 အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးသည်စားသုံးသူများနှင့်အတူပူးတွဲဖန်တီးရန်ရေရှည်ဘို့ငါတို့ကုမ္ပဏီတခု၏ persistent ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်, Palmitoyl Tripeptide-5 Powder, syn-coll, သင် အမြဲသင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီအတွက်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်တဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ကြှနျုပျတို့သိဘာမှအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုမေးလျှောက်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ကျနော်တို့အော်တိုအားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့က Win-Win ခွအေနကေိုအဘို့သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ယခင်: Palmitoyl Tripeptide-1
နောက်တစ်ခု: Palmitoyl Tetrapeptide-7